WAR DEG DEG AH:Beesha Ra’iisal Wasaare Kheyre Oo Kulan Ka Yeelanaya Arinta Is Casilaadiisa iyo warar kale.. - Banaadirsom
Home Arimaha Bulshada WAR DEG DEG AH:Beesha Ra’iisal Wasaare Kheyre Oo Kulan Ka Yeelanaya Arinta...
WAR DEG DEG AH:Beesha Ra’iisal Wasaare Kheyre Oo Kulan Ka Yeelanaya Arinta Is Casilaadiisa iyo warar kale..
Muqdisho (Banaadirsom)-Beesha uu kasoo jeedo Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa waxay kulan ka leeyihiin Qadiyadaan is casilaadiisa la qorsheeyey iyadoo madaxweyne Farmaajo uu aqbalay badelka Xasan Kheyre.
Siyaasad kacsanaan ah ayaa Dalka inuu galo laga cabsi qabaa maadaama Ra’iisal Wasaaruhu hayo furaha dawlada oo Heshiisyo badan Beesha caalamka lala galay isagu saxiixay.
Odayaal iyo Waxgarad kasoo jeeda Beesha Ra’iisal Wasaaraha ayaa ka arinsanaya hadii Kheyre la badelo iyo Booska ay heli karaan,iyadoo Xildhibaanada Beesha loo yeeray inay Kulanka soo xaadiraan.
Warar ayaa sheegaya in Beesha Murusade ay doonayaan in Senetor Cabdi Dhuxuloow (Dhag dheer) oo ka mid ah Golaha Aqalka Sare uu usharaxan yahay Booska Kheyre.
Hawiye ayaa ah mid ku tartameysa Xilkaan Wasiirka Koobaad Ee Xukuumada noqonaya hadii Xasan Cali Kheyre meesha ka baxo oo is caislaadiisa ku dhawaaqo.
Beelaha Habar gidir iyo Abgaal ayaa dhankooda baratan ugu jira Xilka Ra’iisal wasaaraha inay helaan,lamana saadaalin karo qofka badelka unoqon kara Kheyre hadii uu Istiqaalada lagu qasbayo ku dhawaaqo.
Xasuuso Sanadkii 2011-kii bishii June oo hadda 8 Sano laga joogo (Kampalla Accord) xilligaas oo Ra’iisal Wasaare Dalka ka ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Sheekh Shariif ay isku qabteen Siyaasada laguna Qasbay inuu Farmaajo Baarlamaanka Hortiisa isku casilo,iyadoo Shacabku ay aad u la dhaceen Siyaasadii Farmaajo Ee xilligaasi.